त्रिवि शिक्षण अस्पतालले ६ महिनामा कलेजो प्रत्यारोपण गर्ने - Naya Patrika
त्रिवि शिक्षण अस्पतालले ६ महिनामा कलेजो प्रत्यारोपण गर्ने
अर्जुन अधिकारी, काठमाडौं | साउन ०२, २०७४
भारतमा भन्दा सस्तोमा प्रत्यारोपण हुने अस्पतालको दाबी
त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा चालू आर्थिक वर्षबाट कलेजो प्रत्यारोपण सेवा सुरु हुने भएको छ । अस्पतालको ३५ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. दीपक महराले यसै वर्षबाट कलेजो प्रत्यारोपण सेवा सुरु गर्ने जानकारी दिए । यसअघि मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा दुईपटक सफल कलेजो प्रत्यारोपण भइसकेको छ ।
सबै तयारी भएको उल्लेख गर्दै महराले डा. रामेश सिंह भण्डारी नेतृत्वको टोलीले कलेजो प्रत्यारोपण गर्ने स्पष्ट पारे । अस्पतालले पहिलोपटक कलेजो प्रत्यारोपण गर्न लागेको हो । ‘कलेजो प्रत्यारोपण गर्न हामीसँग कर्मचारी सक्षम छन् । एक सातामा एउटा कलेजो प्रत्यारोपण गरेर अघि बढ्ने लक्ष्य छ,’ महराले भने, ‘प्रत्यारोपणका लागि सुरुमा अस्ट्रेलियन चिकित्सकहरूको सहयोग लिनेछौँ । त्यसपछि हामी आफँै गर्नेछौँ ।’
सरकारको ११ करोड सहयोग
कलेजो प्रत्यारोपणका लागि आवश्यक उपकरण खरिद गर्न सरकारले अस्पताललाई ११ करोड दिएको महराले बताए । उनले थपे, ‘६ महिनाभित्र कलेजो प्रत्यारोपण गर्ने तयारी गरेका हौँ । यसका लागि सामान्य उपकरणबाहेक सबै तयारी पूरा भएको छ ।’ प्रत्यारोपण तालिम लिन चिकित्सकको टोली विदेश गएको छ । ‘हामी भारतमा भन्दा सस्तोमा प्रत्यारोपण गर्नेछौँ’ महराले भने, ‘भारतमा कलेजो प्रत्यारोपण गर्दा ६० देखि ७० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । हामी १५ देखि २० लाख रुपैयाँमा प्रत्यारोपण गर्छौँ ।’
गुणस्तरीय चिकित्सक नेपालमै : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपालमै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा रहेको बताए । उनले त्रिवि शिक्षण अस्पतालले आम नागरिक र बिरामीलाई पुर्‍याएको योगदानको उच्च मूल्यांकनसमेत गरे । ‘नेपालमै दक्ष र गुणस्तरीय चिकित्सक छन्,’ उनले भने । उनले अस्पतालको विकास र विस्तारमा सरकार सदैव सँगै रहेको पनि बताए ।